NOOC GUBASHO: QULQULO WAXTAR LEH IYO KA HORTAGGA, SHARAXAADDA IYO URURINTA, BEERITAANKA IYO DARYEELKA. CODSIGA: SIDA LOO SOO SAARO DECOCTION IYO QAADAN TINCTURE AH EE GEEDO - SOOSAARKA DALAGGA
Daawada dhirta dawada: faa'idada iyo dhaawaca jidhka
Ubax leh magac cabsi leh - dhab ahaan, ma aha oo kaliya warshad nabadgelyo leh, laakiin sidoo kale daaweyn. Qaranka krovokhlebka waxay heshay 36 magacyo kale, kuwaas oo keliya saddex - kamokhlopёbka, dhiig-bax iyo dhiig baxa, oo waafaqsan nuqul Latin ah ee magaca geedkaan, inta soo hartey ayaa tilmaamaya dhirtaas daawada ah dhinacyada kale: tixgelin.
Qeexitaanka Botanical: waxay u eg tahay krovloblebka
Warshadkan dilka ah wuxuu ku koraa meeraha dhererka, wuxuu leeyahay caleemo feate ah oo caleemo qoyan iyo ubaxyo yar yar oo mugdi ah ku urursan madaxa. Qaar ka mid ah noocyada krovokhlebki waa mid aad u wanaagsan oo muuqaal ah in beeralayda ubax ay ku beeraan beertooda loogu talagalay ujeedo qurxinta.
Geedhu waxay leedahay xidid awood leh, taas oo ah qiimaha daaweynta ugu weyn. Pickles wuxuu ku soo baxaa oo keliya sanadka saddexaad ama shanaad ee noloshiisa.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxyaabaha faa'iido leh iyo daawooyinka isticmaalka daawooyinka sida: cawska, cawska, cawska, qandhicilka, qoryaha, qoryaha, boodhka, cawska, cohosh madow iyo stevia.
Halabuurka dhirta tani waa mid kala duwan oo badan oo ka mid ah faa'iido u leh sifooyinka jidhka bini'aadamka.
Acids organic, kuwaas oo si weyn u jooga kinket, kicin soo saarista casiirka dheefshiidka, caadiyan ka dheelitirka acid-saldhigga jirka, iyo sidoo kale kor u qaadista burburka dufanka iyo xannibay koritaanka bakteeriyada.
Iyo sterols ee ku jira cawsku waxay kor u qaadaan hawlaha difaaca ee nidaamka difaaca, waxay gacan ka geystaan ​​hawlaha caadiga ah ee nidaamka wadnaha iyo xididdada, ka saaridda maraakiibta "kolootiin" xun.
Haysashada bactericidal, astringent iyo dabeecadaha anti-bararka ee tannins waxay saameyn muhiim ah ku yeelan kartaa habka dheef-shiidka iyo habka ugu wanaagsan ee waxqabadka ee habka caloosha iyo mindhicirka. Joogitaanka saliidaha lagama maarmaanka ah, taas oo ayadoo loo marayo antispasmodic, sedative, bakteeriyada iyo sifooyinka kale ayaa si wanaagsan u saameeya nidaamka dareenka iyo firfircoonida socodsiinta mareenka caloosha iyo mindhicirta, waa muuqan kartaa cawska.
Cuntada yaryar waxaa lagu daraa fitamiin C, faa'idooyinka taas oo loo yaqaano qof walba, iyo sidoo kale cirifka xorta ah ee caanka ah - carotene, oo aan laheyn tayada dabiiciga ah ee dabiiciga ah, laakiin sidoo kale waxay xoojisaa nidaamka difaaca jirka.
Ma taqaanaa? Yakuts ayaa weli ku raaxeysanaya sumcadda weyn ee suxuunta laga soo bilaabo xididka barafoobay, iyo sidoo kale xididkeeda, lagu kariyey caanaha.
Waxaa sidoo kale jira saponins oo ku yaal geedka, taas oo ay weheliso awooddooda la yaqaan ee lagu nadiifinayo nidaamka broncho-pulmonary, xajin xoog leh iyo qaadashada xaako ka soo baxa, sidoo kale waxay hagaajinaysaa macdanta iyo cusbada biyaha-cusbada.
Macdanta ayaa si aad ah loogu soo bandhigay geedo-geedkan oo ah noocyadda macro- iyo mareeyn:
Geedkan wuxuu ku koraa Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, iyo sidoo kale gobollada Aasiya qaarkood. Waxay jeceshahay in ay degto bangiyada, wabiyada, daadadka iyo qulqulka qallalan, geesaha kaynta iyo meelaha laga soo galo, meelaha lagu xoqdo, meelaha qulqulka leh. Tayada sifooyinka sare ee sariiraha daroogada waxay keeneen soo saarida firfircoon ee asalkeeda, taasoo ka dhalatay taas oo ay kala duwan tahay.
Waa muhiim! Gobolka Kharkiv ee Ukraine, gobollada qaarkood ee Ruushka, iyo sidoo kale Latvia, deeq bixiyaha ayaa ku liis gareynaya Buugaagta Casaanka ee degaanka.
Waxyaabaha ku jira cawska tiro badan oo ah maaddooyin wax ku ool ah ayaa go'aaminaya sifooyinkiisa bogsashada gaarka ah, oo lagu muujiyay sifooyinka noocaas ah:
Tilmaamaha loo isticmaalo: waxa ku jira cudurada
Tijaabooyin kala duwan oo waxtar leh oo firfircooni leh oo gubanaya ayaa suurtogal u ah in si waxtar leh loo isticmaalo daaweynta:
dhiig-bax gudaha ah;
Marka cagaarshowga waxaa loo isticmaalaa habab kala duwan oo daawada dhaqanka ah. Soo ogow sida loo isticmaalo: lacunosa, bollard, chives, buckthorn badda, gadaal, jimicsiga fardaha, caleemaha blueberry, jimicsiga dabaasha, orchard, beerta ilaalinta iyo medunits.
caabuqa xuubabka xabka;
Dhakhaatiirta dadku waxay isticmaalaan warshadaan, ugu horreyn ku salaysan magaca weyn - inay joojiyaan dhiigbaxa kala duwan: gastric, mindhicirrada, uterine, sambabada, dhiig karka, iyo kuwa kale. Waxaa sidoo kale si firfircoon loo isticmaalaa daroogada krovokhlebki si loola dagaallamo dhibaatooyinka caloosha, gaar ahaan shuban iyo dysentery.
Dhakhaatiirta dadwaynaha waxay si firfircoon ula dagaallamaan geedkan iyada oo leh maqaarka maqaarka, nudaha jilicsan iyo xuubka xuubka, dhibaatooyinka haweenka, iyo sidoo kale cudurada otolaringichesky iyo dabiiciga ilkaha.
Ma taqaanaa? Oo cawska iyo cawska dhagta, iyo geedaha qabowga la yidhaahdo, iyo arsenik oo dhammuna waa caws oo kale.
Awoodda helitaanka daawada dhiigga ee si dhakhso ah, tusaale ahaan, bakteeriyada dysenteres, waxay u oggolaaneysaa inay si ballaaran u isticmaalaan daaweynta carruurta - sida jeermisyada, ka hortaga, iyo sidoo kale xanuunada iyo raadraacayaasha shubanka, infekshanka mindhicirka iyo enteritis. Waxay sidoo kale wax ku ool u yihiin ka hortagga geedi-socodka nabarrada ee xuubabka xuubka afka iyo sanka.
Diyaargarasyo ​​daweyn oo ka timid geedkan ayaa si fiican loogu taliyay in lagu daaweeyo xannuunada iyo cudurrada dhagta ee dhallaanka.
Decoction rootiga decoction rootiga loo isticmaalo by compresses iyo looska ayaa aad u wax ku ool ah in lagu daaweeyo inflammations kala duwan ee maqaarka ee carruurta.
Daroogooyinka ka socda dhirta ayaa muddo dheer loo xaqiijiyey in ay noqdaan daaweyn wax ku ool ah oo si degdeg ah u joojisa dhiigga inta lagu jiro dhiigbaxa uterineinka, iyo sidoo kale caadiyan caadada caadada. Tani waxay u heellan tahay awoodda loo yaqaanay dhirta si ay u yeeshaan saameyn yareynaya muruqyo isku mid ah oo ku jira xubnaha gudaha ee jirka bini'aadamka, oo ay ku jiraan ilmo-galeenka.
Iyo awoodda daaweynta ballaaran ee ka hortagga daroogada ee ka yimaada dhiig-nibbling waxay u oggolaaneysaa inay joojiyaan caabuqa ku dhejinta iyo sida ugu habboon wareegga caadada.
Waa muhiim! Dumarka uurka leh ayaa si adag loo mamnuucay in ay qaataan maraq iyo filiimo khleblebki.
Iyada oo isticmaalka saxda ah ee daawooyinka ka soo dhirta this, ma keeni doonaan waxyeelo jirka ah. Dhibaatada kaliya ee diidmada ah ee la diiwaangeliyay ee ay qaadanayso muddada-dheer waxay kordhisaa xinjirta dhiigga.
Ka hortagga isticmaalka mukhaadaraadka ka yimaada dhiigga ayaa ugu horeyntii ka walaacsan dadka aan dulqaad u lahayn qaybaha geedka.
Sidoo kale, mukhaadaraadka ha uga qaadin geedkan marka xididdada dhiigga la xiro, sababta oo ah daroogadu waxay leeyihiin awood ay ku dheehan karaan maraakiibta dhiigga. Sababtoo ah, waa in aan loo qaadin hypertension iyo madax xanuun uu keeno.
Xakameynta xinjirta mindhicirka ee dufanka leh ee diyaargarayntu waxay sharraxaysaa waxyaabaha aan loo baahnayn ee isticmaalka caloosha.
Laguma talin in la qaato daawooyinkaan iyo hooyooyinka kalkaaliyaha ah.
Karinta kariska: sida loo qaato
Dhaqdhaqaaqa muddada dheer wuxuu muujiyay in gumaadka iyo tincture-ka ay muujiyeen inay yihiin daroogooyinka ugu wax ku oolka badan ee ku saleysan gubasho.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan guryaha dawooyinka ee tincture propolis, aconite iyo tinctures ee cayayaanka shinni.
Tincture loogu talagalay isticmaalka gudaha
Saddex litir oo litir ah waa inay ahaataa kala bar buuxa oo xididdada jajaban ee geedka ka dibna ku shub vodka qoorta.
Hal bil ka dib, tincture ayaa mar hore loo qaadan karaa hadal lix jeer maalintii, laba qaado oo waaweyn. Tincture Tani waxaa loogu talagalay dhibaatooyinka leh qanjirka thyroid, mareenka caloosha iyo mindhicirka, nasopharynx, iyo oncology.
Tincture for isticmaalka dibadda
Saddex daloolow laba litir oo litir litir ah waa in laga buuxshaa xidid la jarjaray, ku dar vodka meesha sare ee kushiinka oo u dir si aad ugu istaagto meel loogu talagalay saddex toddobaad.
Codso tincture waa inay noqotaa oo kaliya ka dib markii biyo lagu tiriyo saamigaan: nus koob oo biyo ah halkii shaaha oo tincture ah.
Primochka leh tincture qasi leh waa in lagu dabaqo meelaha dhibaatooyinka maqaarka. Tincture ayaa sidoo kale biyo raaci kara afka iyo cunaha.
Qalabku wuxuu ku habboon yahay jeermisyada cusub, iyo bogsashada duugista, nabarrada liidata.
Maraq loo isticmaalo gudaha
Rootka dhirta la jajabiyey ee qiyaasta laba qaaddo oo shub ah ayaa lagu shubay 200 ml biyo karkaraya, ka dib markii weelka daboolay daboolka oo ku riday karkaraya 30 daqiiqo. Ka dib 10 daqiiqo ka dib, maraq waa in la miiro, tuujin dhererka iyo iyadoo la adeegsanayo biyaha la kariyey si ay u soo celiyaan mugga ilaa 200 millilitir.
Waxaa lagu kaydiyaa qaboojiyaha ugu badnaan laba maalmood, waxaadna u baahan tahay inaad qaadato cuntada kadib, hal qaado oo 6 jeer maalintii. Dib-u-habeynta ayaa leh shimbiro, bactericidal, dabeecad, iyo ficilo ku dhaca cudurro badan oo kala duwan, si looga gudbo tayadaas oo loo baahan yahay.
Maraq loo isticmaalo dibadda
In 400 millilitir oo biyo ah, saddex qaado oo ah xididdada dhirta la jajabiyey ayaa lagu shubay, isku dar ah waxaa la kariyey nus saac gudaheed waxaana loo rogay laba saacadood. Kadib markaad leexato, decoction waxaa loo isticmaali karaa qaabka cadaadiska qoyan, kareemo iyo maydhashada si loola dagaalamo bararka maqaarka.
Horumarinta fiiqitaanka: beeritaanka iyo daryeelka
Geedkan ma aha mid madaxbannaan oo ma aha mid u jilicsan shuruudaha koritaankiisa, laakiin xeerarka qaar waxay weli u baahan yihiin in la ilaaliyo marka la beerayo.
Dabeecadda, xayawaanka ayaa si weyn u dareemaya meelaha bannaan ee cawska, iyo duurka u dhow bangiga wabiga. Sidaa darteed, beerta, waxay si isku mid ah u horumarisaa goobaha qorraxdu ka yaryar iyo kuwa yaryar.
Inkasta oo cawska this caleemaha uusan samayn dalabyada gaarka ah ee tayada ciidda, waxay sidoo kale u mahadcelin doonaa ciidda dabacsan iyo bacrin ah qaab ah koritaanka degdeg ah iyo ubax badan. Sidaa darteed, ka hor inta beerto dhulku ma faragelin bacriminta leh dambaska iyo humus.
Warshadani waa mid si fudud u faafin abuurka. Haddii aad abuurto miraha si qoto dheer ah oo ku saabsan a centimeter a ciidda si fiican u dabacsan dayrta goor dambe, guga waxaad arki kartaa caleemo saaxiibtinimo. Si kastaba ha ahaatee, krovoklebka Bloom kaliya ee sannadka saddexaad.
Uma dulqaadanayo isu-tallaalidda, laakiin waxaa lagu faafin karaa qaybinta, qodaya guga ama dhamaadka xagaaga iyada rhizomes xoog leh oo ka baxsan dhulka iyo si taxadar leh u qaybin qaybo. Geedka dib ugu beeray, qaybahaas xasaasiyadeedu si fiican ayey u qaadanayaan.
Warshad Tani, inta badan ku koraya dabiiciga ah ee bangiyada iyo wabiyada dhow, jecel carrada qoyan.
Waa muhiim! Qoyaanka hawada ku hareereysan ee daawada hoyga waa suurad wacan in aan ka yarayn 60%.
Sidaa daraadeed, cawsku uma baahna wax aad u badan sida waraabin joogto ah si ay carrada agagaarkeeda u noqoto mid joogto ah.
Gubistu ma aha mid ka soo jeeda xaalad heerkulka ah mana ka baqo qabow, muujinta iska caabin xitaa marka uu dhaxan yahay. Dhammaan noocyada cayayaanka iyo tirada cudurada aadka u daran ayaa ah mid aan khatar aheyn.
Dhamaan walxaha ugu qiimaha leh ee dhirta ayaa ku jira xididada iyo rhizomes: waxay sidoo kale u adeegaan sida wax yaryar daawooyinka. Waxay badanaa ku qodaan dhammaadkii Agoosto - horraantii Sebtembar, marka xilliga Jadeecadu uu dhamaado. Markaad si buuxda u qoday geedka oo dhan, oo laga nadiifiyey dhulka, waa in la maydiyaa, googooyaa ilaa shan iyo toban sintimitir dherer ah oo tagay si ay u engegaan hawada cusub.
Waxaan kugula talinaynaa in aad akhrido sifooyinka bogsashada ee asalka guga iyo Kalgan.
Dhowr saacadood ka dib, alaabta ceeriin ah ayaa loo soo diraa si qallayl ah qorraxda qorraxda ama, haddii cimiladu qoyan tahay, meel qallalan ah sida qiiqa. Haddii kuleyliyaha dabiiciga ah loo isticmaalo qalajinta, heerkulku waa inuusan ka badneyn 60 ° C - haddii kale haddii la gooyo walxo waxtar leh ayaa raaci kara.
Warshadkan oo leh magac magac leh, laakiin quruxda muuqaalka iyo buuxsanaayo walxaha daaweynta gudaha, waxay ku nool yihiin mid ka mid ah meelaha ugu horreeya ee ka mid ah qalabka bogsashada ee dhakhaatiirta dhaqanka. Dareen dheeraad ah oo dheeraad ah ayaa la siiyaa daroogada deeq bixiyaha iyo daawada rasmiga ah: laga soo saaro xididdada geedkan horeba waxaa laga iibsan karaa farmasiyada.